ဘာကြောင့် အွန်လိုင်း တက်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ခြင်းခံရတာလဲ ? – Driver
ဝင်ရောက်လာသော အလုပ်များကို လစ်လျူရှုမိခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်မိပါက အလုပ်အသစ်များလက်ခံရရှိခြင်းမှ ခေတ္တတားမြစ်ခြင်းခံရနိုင်ပြီး "Unavailable"(ခေါ်ယူမရရှိနိုင်သော အခြေအနေ) သို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ ဤသို့ဖြစ်ပေါ်ပါက Grab ယာဉ်မောင်း app ပေါ်တွင် Unavailable အဖြစ်အချိန်ဘယ်လောက်ကျန်ရှိမလဲဆိုတာကို timer ဖြင့်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Timer ကုန်ဆုံးသွားသည်နှင့် အလုပ်များလက်ခံခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းထားမှုမရှိတော့ကြောင်းကို အသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Unlock ခလုပ်အား နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အလုပ်များကိုဆက်လက်၍ လက်ခံနိုင်ပါပြီ။ အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် Stay Unavailable အားရွေးချယ်၍လဲ unavailable (ခေါ်ယူမရရှိနိုင်သော အခြေအနေ)ဖြင့်ဆက်လက်နေနိုင်ပါတယ်။
Timeout အချိန်ကုန်ဆုံးရန် ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ ?
Timeout အချိန်ကြာမြင့်ချိန်ကို Grab app ပေါ်တွင်ပြသပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်မံ၍ လစ်လျူရှုခြင်းများ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းများကြောင့် ပိုမိုရှည်ကြာသော Timeout အချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
1126 out of 1713 found this helpful